म्याकुरी र खुइली डे’टिगंमा मस्त,एलिश राई भए हेरेकोहेकै यो रमाइलो शो(भिडियोसहित)हेरी मज्जा लिनुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
म्याकुरी र खुइली डे’टिगंमा मस्त,एलिश राई भए हेरेकोहेकै यो रमाइलो शो(भिडियोसहित)हेरी मज्जा लिनुहोस।
काठमाडौँ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा हाँस्यशृखलाहरुको निर्माण हुनेक्रम बढ्दो छ । को’रोना क’हरको समयमा पनि जसमध्येको एक हो नेपाल टेलिभिजन’मा प्रसा’रण भइरहेका आ’धा दर्जन टेलिशृखला’हरुमध्येको एक हो गो’लमाल ।
नेत्र राउतले निर्देशन गर्दै आएको शृखलामा चर्चित कलाकारहरु शिवहरी आचार्य, शम्भु थापा, बिनोद राई, पवन खतिवडा म्याकुरी, प्रयांकस्टार एलिश राई, न’बिना सिलवाल खुईली, कमेडी च्याम्पियनबाट चर्चा कमाएका खड्ग बहादुर पुनमगर खबपु, लगायतका लोकप्रिय कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।
शृखला हरेक बिहिबार राती नेपा’ल टेलि’भिजनमा ८ बजेर ५० मिनेटमा र युट्युवमा बि’हिबार नै ९ बजेर ३० मिनेटमा प्रशारण हुँदै आएको छ । समसामयिक विषयमा ब्यग्य गर्दै तयार पारिएको गोलमालको १ सय २४ औँ शृखला हेर्नुहोस् भिडियोमा:
Previous धर्मशास्त्र अनुसार सह गोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन बिहे? यस्तो छन् कारण,,,जान्नको लागि पूरा पढ्दै शेयर गर्नुहोस् ।
Next गायिका मेनुका परियार राजू परियारसँग यती धेरै किन रोइ, न ? ( भिडियोसहित),,,हेर्नुहोस।